Soo dejisan UNetbootin 681 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariLive CD & USB gaariUNetbootin
Bogga rasmiga ah: UNetbootin
UNetbootin – software ah si loo abuuro flash drive Downlaods ama disk adag la nidaamka qalliinka Linux. UNetbootin taageertaa badan oo Linux qaybinta la nooc oo kala duwan oo ah nidaamka, iyaga ka mid ah Ubuntu, Buoni, Fedora, Debian, Centos oo kale. Software qabata rakibo leh nidaamyada hawlgalka kala duwan ee internetka ama mid u dhiganta il hore soo bixi. UNetbootin bandhigayaa sharaxaad kooban oo la xidhiidha in website-ka rasmiga ah ee qaybinta doortay. UNetbootin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi biilasha nidaamka kala duwan si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka.
Waxay abuurtaa ah flash drive Downlaods ama drive adag
Ka hortagga formatting ee drive flash ah
Taageerada ugu badan ee qaybinta Linux
Downloads utilities nidaamka
Soo dejisan UNetbootin
Faallo ku saabsan UNetbootin
UNetbootin Xirfadaha la xiriira